ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်
Cabo San Lucas isavacation paradise. It has white sand beaches, crystal clear water, တောင်များ, it is warm all the time and has tons of activities for everyone.
Scenic Kitzb'hel is everything an alpine resort should be:acharming village withamedieval center,aworld-famous apr's-ski mecca, andaski run regularly used on the World Cup circuit. Whether you go to Kitzb'hel to ski the Hahnenkamm or to party all night (သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး), Kitzb'hel doesn't disappoint.
You can read all about Barcelona in history books, since this city has been around since Roam times. အဘယ်သူမျှမ, we are not going to give youahistory of Barcelona, but rather tell you about the best ways into and around the city, as well as all of the wonderful sites to see in this vibrant city. Guell Park, the Water Parks and more will tempt you but there is so much more to see in Barcelona that you will need to come back time and again. Foratruly emotional experience, အလည်အပတ် ...
ကမ်းခြေ Villas ဖူးခက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, အိမ်ခြံမြေ phuket, thailand အိမ်ခြံမြေ, jumeirah, thailand နေအိမ်များ, phuket Villas, ဖူးခက်ပိုင်ဆိုင်မှုအလည်အပတ်ခရီး: www.tgr-asia.com. သင်တစ်ဦးဇိမ်ခံနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားအားလပ်ရက်စီစဉ်နေပါတယ်? သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံး option ကိုဖူးခက်၏လှပသောမြေယာသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောချမ်းသာကိုခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဤအကောင်းဆုံးသောကျွန်းမှာလည်းလူကြိုက်များသောကို 'ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၏ပုလဲ' 'အဖြစ်လူသိများသည်.
လူတိုင်းanice အပေါ်သွားကြဖို့လိုသည်, လြှော့ပေါ့သော, နှင့်တိတ်ဆိတ်အားလပ်ရက်တိုင်းတစ်ချိန်ကနေ, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမတနင်္ဂနွေများအတွက် 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ကနေဝယ်နိုင်ကြောင်းပိုက်ဆံ၏ကြင်နာရှိပါတယ်. ကြောင်းခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်နှစ်အနည်းငယ်သင်တစ်ဦးစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်များအတွက်ရုံအလုံအလောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပြီဟု chance, သငျသညျမြို့ပတ်ပတ်လည်သွားများအတွက်ပထမဦးဆုံးနှုန်းကိုဟိုတယ်ပေါ်မှာရှိသမျှ ထွက်. နည်းနည်းလက်ဝဲရှိသည်ဖို့ရှေးခယျြမှုရှိ, သို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအကြောင်းပြချက်မှာစျေးနှုန်းကောက်ဖို့4ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်နှင့်နေဆဲကြောင်းဟိုတယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုမြင်လျှင်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးဘတ်ဂျက်ရှိတယ် ...
St Anton in Austria isaworld renowned skiing facility, positioned in the belt that is known as Austria's skiing capital. သာ 100 miles from Solden, and with Innsbruck and Otztal close by, visiting Austria onaskiing vacation could not get any easier, or more action-packed.
Outside the city limits of Barcelona lie intriguing suburbs,astriking coastline and amazing mountains. All lie in wait for the intrepid visitor. အန်တိုနီယို Gaudi, the late famous architect, commissioned Parc G'ell,apeculiar array of vibrant ceramic benches, large ornamental lizards, mosaics and pavilions of knotted stone. It is located behind the city and commandsagreat view of Barcelona. Initially constructed withaview to beingamarket, အ 84 stone columns of th...
San Diego မှရှိသင့်အားလပ်ရက်များအတွက်တစ်ဦးကဂရိတ်သဘောတူညီမှုရရှာမည်နည်း
san Diego မှ, မည်သည့် touristy အမျိုးအစားမြို့ကြီးမြတ်စျေးနှုန်းများမှာကြီးမြတ်အပေးအယူ၎င်းတို့၏ဝေစုရှိပါတယ်တူသော. များသောအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများ packages များ၌တွေ့ကြသည်သို့သော်ကြီးစွာသောအပေးအယူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တခြားဧည့်သည်ဆွဲဆောင်မှု. နည်းပါးလာဧည့်သည်များမြို့မှာအခါခရီးသွားဧည့်ဒေသများရှိများစွာသောအနိမ့်ရာသီအတွက်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်ကဲ့သို့နိမ့်နှုန်းထားများမှာ.
New York City is the city that never sleeps, es verdad? ကောင်းစွာ, it's certainly no wonder with so many places and stuff that would please all the senses. There's the Statue of Liberty, ဗဟိုပန်းခြံ, the Madison Square Garden and God knows what else. But the question is...where do you stay in New York City?
Sharm el ရှိတ်အားလပ်ရက်
Sharm El Sheikh which gave the Red Sea an international reputation as one of the world's most extraordinary diving destinations in the Red Sea, အဲဂုတ္တုပြည်၌.
When traveling to large cities such as Barcelona, deciding between the best hotels can beamajor issue for many people. In this article youll learn about all the different accommodations at your fingertips for your traveling pleasure through Barcelona and your best bets on where to stay. Whether youre looking to stay in maximum comfort ata4 သို့မဟုတ်5star hotel, or if youre onabudget and looking for cheaper accommodations, or if you just want to be adventurous and want to ...
လျှော့စျေး Austin ဟိုတယ်
အီတလီမှာခရီးသွားလာ: အဆိုပါ Amalfi ကမ်းခြေ.
Larnaca ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးအဆက်မပြတ်စည်ပင်မြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဓမ်မဟောငျးကမျြးကာလ၌, မြို့သူမြို့သား Kition အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်နှင့်ရှေးဟောင်းမြို့တော်များ၏အပျက်အယွင်းနေဆဲယနေ့မြင်နိုင်ပါသည်.
CASA ကိုလိုနီကမ်းခြေနှင့် Spa, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်သာအစစ်အမှန်ငါးခုကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်. များစွာသောငါးကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များနှင့်မတူဘဲကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးအသေးစား inns တဦးဖြစ်ခြင်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည် & ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဟိုတယ်များ, သာနှင့်အတူ 40 အခန်းပေါင်းဒါပေမယ့်လည်းတပြင်လုံးကိုကာရစ်ဘီယံထဲမှာ. ကျနော်တို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ခရစ္စမတ်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်, နှင့်သာငါးခုကြယ်များနေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ကျနော်တို့အားလုံးအားလုံးပါဝင်နိုင်တူသော dont, ကျနော်တို့အလွန်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရ. ဒီတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများကြီးတက်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျနော်တို့က Ca မရွေး ...
စျေးပေါ Las Vegas တွင်ဟိုတယ်နေရာထိုင်ခင်း
Las Vegas မှ, မည်သည့် touristy အမျိုးအစားမြို့ကြီးမြတ်စျေးနှုန်းများမှာကြီးမြတ်အပေးအယူ၎င်းတို့၏ဝေစုရှိပါတယ်တူသော. The great deals however are also limited to certain days of the week or month. This is not to say that Las Vegas isn'tagreat place to be anytime. The lower rates are like many in many areas, available in low season when there are fewer visitors.
American Express ခရီးသွား
Family vacations areagreat way for busy parents to have quality time with their kids. But without proper planning, it can easily become stressful and disappointing for everyone. ဒါကြောင့်, do yourselfafavor and plan ahead! 1. Ask the hotel about child facilities Some resorts are built for couples, with lots of spas and romantic nooks. Kids will hate this. You needaresort with plenty of indoor recreational facilities, where they can play safely, and happily. Some hotels ...
New York City is the city that never sleeps, es verdad? ကောင်းစွာ, it?s certainly no wonder with so many places and stuff that would please all the senses. အဲဒီမှာ?s the Statue of Liberty, ဗဟိုပန်းခြံ, the Madison Square Garden and God knows what else. But the question is...where do you stay in New York City?
Big Island တွင် Hilo အားလပ်ရက်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, millions of tourists make the decision to travel to Hawaii. Are you looking to become one of those individuals? ဒါကြောင့် အကယ်., there isachance that you may be planningaHilo vacation. Hilo is located along the eastern coast of Hawaiis Big Island. Most known for its wide array of local attractions and activities, Hilo is also known for its selection of overnight accommodations, which tend to include hotels and vacation resorts. If you are planning on takingaHilo vacat...
Benidorm စပိန် Rich
Nestled inavalley and bordered to the east by the Irish Sea, the capital of Northern Ireland, ဘဲလ်ဖတ်, isavibrant and lively Celtic city that lives up to its nickname of 'The Hibernian Rio.' Situated on the River Lagan, the pedestrian-friendly city enjoysafocal point in Donegal Square where the architecturally stunning City Hall dominates the skyline, and elsewhere Victorian and Edwardian architecture can be enjoyed by visitors on foot.
ပတ္တရား, ထိုင်းနိုင်ငံ Chonburi ပြည်နယ်ရှိ, အကြောင်းဖြစ်သည် 150 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင်ဘန်ကောက်၏. ဒါဟာဖြစ်နိုင်ရောနှောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ထိုင်းအတွက်လူသိအများဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါပတ္တရားမြို့နှင့်၎င်း၏သုံးကမ်းခြေပတ္တရား, Jomtien, နှင့် Naklua ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလအတွင်းနှင့်အပြီးလျင်မြန်စွာကြီးပြင်း, အမေရိကန်တွေဟာရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. နှင့်အပန်းဖြေယနေ့တွင်ပတ္တရားငါးခု-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များစွာဂုဏ်ယူဘို့အမေရိကန် GIS မြို့ကျူးကျော်လာသောအခါ, ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်း, နှင့်တက်ကြွတွေကတော့ ...
Oscoda သဲသောင်ပြင် Lodge
10 အားလပ်ရက်အရောင်းသိကောင်းစရာများ: အဆိုပါရာသီတွင်ငွေလုပ်နည်း
ဘေလ်ဘောင်မှဒါမှမဟုတ်မဘေလ်ဘောင်မှ, ပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်အဆိုပါမေးခွန်း Is.
ဧည့်သည်များသည် Phoenix မှလမ​​်းညွှန်, အရီဇိုးနားပြည်နယ်, ယူအက်​​စ်အေ